Nitaky famoahana olona voasambotra: andian’olona anjatony nirohotra manoloana ny biraon’ny zandary. | NewsMada
Nitaky famoahana olona voasambotra: andian’olona anjatony nirohotra manoloana ny biraon’ny zandary.
Par Taratra sur 22/06/2018
Nirohotra sy nitokona sady nilanja sora-baventy manoloana ny biraon’ny zandary ao amin’ny GAPJ ao Maevatanàna, omaly antoandro ireo andian’olona anjatony, nitaky ny hamoahana ireo olona miisa 10 nosamborin’ny zandary noho ilay raharaha fanafihana taksiborosy tao Maevatanana…
Nihorakoraka sy nivazavaza manoloana ny biraon’ny zandarin’ny GAPJ ao Maevatanàna ireto andian’olona marobe ireto noho ny fisamborana ireo olona voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny fanafihana amin’iny RN 4 iny. Araka ny fampitam-baovao voaray, nisy olona miisa 10 (talen-tsekolim-panjakana iray ao Beanana ny iray amin’ireo) nosamborin’ny zandary, afakomaly maraina nandritra ny fisavana ireo olona mampiahiahy izay voarohirohy sy ahina ho tompon’antoka tamin’ny fanakanan-dalana ka nahavoaroba fiara taksiborosy Sprinter iray avy any Ambanja hihazo an’Antananarivo tao Maevatanàna, ny talata lasa teo. Vao nahaheno ity fisamborana olona miisa 10 ity anefa ireo mponina ao an-tanàna dia nifamory ka nilanja sora-baventy notarihin’ny ben’ny Tanàna ary nirohotra teny amin’ny biraon’ny zandary. Nitaky ny hamoahana ireo olona voasambotra ireto andian’olona marobe ireto. Niezaka nanazava tamin’ireto andian’olona marobe ireto anefa ny zandary ka nilaza fa fanadihadiana no atao ireo olona ireo ary hatolotra ny fampanoavana rehefa vita ny famotorana ataon’ny zandary. Nifandresy lahatra hatrany anefa ny roa tonta ka nanaiky ihany ireto olona marobe efa nentin-katezerana ireto. Tsy niala teo amin’ny biraon’ny zandary koa anefa izy ireo fa niandry ny tohin’ity raharaha ity.
Handeha hamatotra omby any an-tsaha…
Nilaza ny solontenan’ireo andian’olona marobe ireo fa tsy dahalo mpanakan-dalana araka ny fiheverena azy ireto olona voasambotra ireto fa olona hamatotra omby any an-tsaha sy hiasa volamena. “Tsy misy idiran’izy ireo iny fanafihana taksiborosy iny fa fantatray tsara ireto olona ireto”, hoy hatrany ny fanazavana. Niezaka namita haingana ny fanadihadiana ireto olona voarohirohy ireto ny zandary ka natolotra ny fampanoavana avy hatrany taorian’izay. Tsy nety niala rahateo ireo olona fa mbola nitokona teo akaikin’ny biraon’ny zandary. Naterin’ny zandary teny anivon’ny fampanoavana kosa izy ireo. Nanamafy ny fangatahan’izy ireo amin’ny hamotsorana ireto olona miisa 10 ireto ireo mpanao fihetsiketsehana. Andrasana ny tohin’ny raharaha.
Tsiahivina fa taksiborosy iray avy any Ambanja no niharan’ny fanafihan-dahalo tao amin’ny kaominina ambanivohitra Beanana Maevatanana, ny talata alina teo. Tompon’antoka tamin’ity raharaha fanafihana sy fanakanan-dalana ity ny dahalo miisa valo nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika. Taksiborosy roa no niaraka, saingy afaka ny sakana nataon’ireo dahalo ny iray raha voaroba kosa ilay faharoa. Olona enina naratra mafy ka isan’izany ny mpamily. Voaroba ny olona rehetra tao anaty fiara.